Porn ED အားထောက်ကူပါသလား? Tyger Latham, Psy.D. အားဖြင့် ကုထုံးအတွက်အရေးကြီး - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Porn သည် ED ကိုအထောက်အကူပြုသလား။ Tyger Latham, Psy.D. အသုံးပြုပုံ ကုထုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်
ဒီစိတ်ပညာယနေ့တွင် post မှ Link ကို။
Tyger Latham, Psy.D. အားဖြင့်မေလ 3, 2012 အပေါ် Published ကုထုံး Matters အတွက်
ကျွန်မမကြာခဏအဘို့မိမိတို့ဆီးရောဂါပါရဂူများကရည်ညွှန်းနေသောငါ၏အလေ့အကျင့်အတွက်ယောက်ျားတွေ့မြင် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ " မကြာခဏ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးအချို့ကိစ္စများတွင်နဲ့အတူဒီလူပစ္စုပ္ပန်။ သူတို့သညျငါ့ကိုရောက်ရှိရန်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံသူတို့ထဲကအများစုဟာသာသူတို့၏ "ပိုက်ပဲကောင်းပါတယ်" နှင့်သူတို့၏ပြဿနာများကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အတွက်ဖြစ်ရမည်ကိုပြောသည်ခံရဖို့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုခံကြပါပြီ။ ဒီတစ်ခါလည်းအချို့ကိစ္စ၌ဤစကားမှန်သည်, ဒါပေမယ့်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်မပြဿနာကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးရှာပါ။ တကယ်တော့ငါသည်အဘယ်သူ၏ ED ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံးအချက်များပေါင်းစပ်ရာမှရပ်တပုံယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာကြည့်ဖို့စတင်တာပါ။
လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်အများအပြားအထီး clients များ sheepishly ငါ masturbating တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ ED ညစ်ညမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့မကြာခဏမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်းတည်းထင်ရှိမရှိမေးကြပြီ။ အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူအများအပြားကျန်းမာရေးပညာရှင်များလိုပဲ, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းကျနော့်လူသားရဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုစိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မရကြောင်းစဉ်းစားရန်ကိုသုံးပါနှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်ပညာရေးများအတွက်စည်းကမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ "သင်ကတက်နှင့်ပြဿနာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွစျနိုငျထက် porn စဉ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်နိုင်လျှင်" ငါသည်မှားယှငျးစှာကောက်ချက်ချ; ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားငါ့ကိုမဟုတ်ရင်စဉ်းစားတယ်သိရသည်။
ဒီခေါင်းစဉ်သုတေသနအတွက်, ငါသည်အလျင်အမြန်ငါ၏အအထီး clients များတစ်ဦးတည်းမဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဇယားကိုတစေ့တစောင်းရှာဖွေရေးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစေရန်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေးအနက်ထားတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးဖြစ်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်နှင့်အတူဝငျရောကျစှကျလျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထေူသောလူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မြေများပျက်စီးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြားများစွာတူးဖော်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နှင့်တကွကြွလာသောလွယ်ကူခြင်း, တတ်နိုင်နှင့်အမည်ဝှက်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးကြီးမားသောလူတို့သညျ၏နံပါတ်များကို (နှင့်အမျိုးသမီး) နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သွားပြီ။ နှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားကိုအံ့ဖှယျဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သင်၏အဘရဲ့ Playboy မဂ္ဂဇင်းမဟုတ်ပါဘူး။ "ဆော့ဖ-Core" ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေ kinky themes များနှင့် fetishes အမျိုးမျိုးတို့ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမူးဝြေခင်းခင်းကျင်းတွေနဲ့အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ပုံရိပ်များကိုသာပိုပြီးဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်နှင့်အတူကြည့်ရှုသူပေးနိုငျသောကဗီဒီယို streaming များမှတဆင့်လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းညစ်ညမ်းရှုမြင်နိုင်သည့်နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကပြောပါသည်။
ညစ်ညမ်း၏လေ့လာမှုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပညာရှင်တွေများအတွက်အကျိုးစီးပွားဧရိယာခဲ့ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်နာတာရှည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာမကြာသေးမီကဆေးဘက်လယ်ကွင်းများကဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ထက်ပိုယောက်ျား (နှင့်အမျိုးသမီး) အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိသည်သံသယ, ပေမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်များ၏ပဏာမရှာဖွေရေးတိုက်ရိုက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပညာရေးကိုကိုးကားအလွန်နည်းပါးကားအညွှန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသတိထားမိပါတယ်တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုအီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့်အတူဆက်နွယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတစ်စုအားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ 28,000 အီတလီယောက်ျား၏စစ်တမ်းတစ်ခုအရသုတေသီများကအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွင်းညစ်ညမ်းဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏ "တဖြည်းဖြည်းဒါပေမယ့်ကြီးကျယ်သော" သက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ဦးခေါင်း, ကားလို့စ် Forsta အဆိုအရထိုပြဿနာကို "ထို့နောက်အဲဒီမှာလိင်စိတ်အတွက်အထွေထွေတစ်စက်သည်နှင့်အဆုံး၌တစ်ဦးစိုက်ထူရဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာ, porn ဆိုက်များအောက်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစတင်သည်။ "
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုများအတွက်အကောင့်? စိတ်ပညာအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ blog post: ယနေ့တွင်ခုနှစ်တွင် ( "အဘယ်ကြောင့်ငါအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?"), ဂယ်ရီ Wilson ကတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြား neurophysiological လင့်များဆင်းချိုးတော်မူ၏။ Wilson ကယောက်ျား masturbate မှညစ်ညမ်းပုံရိပ်များအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုအားထားလာသောအခါဦးနှောက်နှင့်လိင်တံအကြားပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ့်ထိခိုက်တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ရှိကွောငျးရှင်းပြသည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့်အတူ, Wilson က "သူကသင့်ဦးနှောက် overstimulate ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ " ရေးသားခဲ့သည်အထူးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခွငျးအားဖွငျ့အပေါ်ယူဆောင် overstimulation အပျော်အပါးရှာကြံ neurotransmitter dopamine-သောနဲ့အတူအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး desensitize နိုင်ပါတယ်မှ sensitivity ကိုလျော့ကျလာ, အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို-အထူးထုတ်လုပ်နိုင်သည် မိတ်ဖက်။ ဤရွေ့ကား neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုညစ်ညမ်းဖို့ "စွဲ" ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲလုံးဝညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအထောက်အကူဖြစ်စေမသာ။
သူတို့အအေး-ကြက်ဆင်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့ညစ်ညမ်းအပေါ်အလွန်အကျွံမှီခိုတဲ့သူအမျိုးသားများအတွက်မကြာခဏဆုတ်ခွာကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာများ၏တိုင်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားကသူတို့လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာဖို့အများကြီးဦးဆောင် "sexless" feeling ကိုဖော်ပြရန်။ သက်သေအထောက်အထားလိင်စိတ်နောက်ဆုံးမှာပြန်လာ-များသောအားဖြင့်မဆက်၏ 2-6 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင်တစ်လျှောက်လုံးနံနက်စိုက်ထူအဖြစ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူ၏တဖြည်းဖြည်းပြန်လာခြင်းဖြင့်သက်သေ abstinence-အဖြစ်, သို့သော်, အကြံပြုထားသည်။ "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" ဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်များစွာသောလူတို့သညျညစ်ညမ်းရှောင်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းအစွန်းရောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သွားအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။
သင်ထှတျအထိပျနိုငျသောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း porn မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိလျှင်ဒါ, သင်တဲ့ professional ရှောင်နှင့်တိုင်ပင်စဉ်းစားရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ များစွာသောလူတို့သညျနာကျင်စွာ Discover ဖြစ်သကဲ့သို့, အစစ်အမှန်လိင်ထိထိမိမိကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်အခြားလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ထိမိခံရရုံတစ် mouse ကိုထိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မ။
Tyger Latham, Psy.D. ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့လိုင်စင်ရလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲများကွံတျောနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ, ကျား, မဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်လိင်တူချစ်သူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်အထူးစိတျဝငျစားရှိပါတယ်။ သူ့ဘလော့, ကုထုံး Matters, psychotherapy ၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံစူးစမ်း။